Munamato weMagnificent. ? Dziviriro & Dhinda | + Ane simba
Munamato weMagnificentMune zvimwe zviitiko izvo zvinodaidzirwowo, munamato wekuMaginiti wakadarika munamato rwiyo rwunodudzirwa neMhandara Maria pachavo nekukwidziridzwa ukuru hwaMwari Samasimba.
Mhandara Maria, amai vaIshe wedu Jesu Kristu, vakaona simba nechishamiso chaMwari pachake paakave nepamuviri nebasa nenyasha dzeMweya Mutsvene waMwari, tinoona izvi mumagwaro matsvene.
Kuva mai vaJesu kwakava mai veavo vese vanotenda mukutenda kwechiKristu, ichi ndicho chikonzero munamato wakakosha uyu wakakosha kwazvo pakati pevanhu vechiKristu.
1 Munamato weiwo wekutanga Magnificent
2 Munamato weMagnificent ekudzivirirwa muLatin
2.1 Munamato wekudhinda
2.2 Chii chiri munamato weMagnificent?
2.3 Chii chinotangira munamato uyu kumhandara?
2.4 Ndogona kunyengetera rini?
Munamato weiwo wekutanga Magnificent
Kudza mweya wangu kuna Ishe uye mweya wangu uzere nemufaro, kana uchifunga nezve kunaka kwaMwari Muponesi wangu.
Nekuti akatarisa iye anozvininipisa muranda wake ndokuona chikonzero pano nekuti ivo vachandifadza uye ndinofara pamazera ese.
Nekuti akaita zvinhu zvikuru zvinoshamisa pamberi pangu, iye Wamasimbaose, uye zita rake dzvene, iye, anonzwira tsitsi kusvikira kumarudzi, kuna avo vanomutya.
Akawedzera ruoko rune simba rake, uye akabvisa kudada kwevanozvikudza, achivhiringidza magadzirirwo ake.
Akadzinga vane simba nekusimudza vanozvininipisa.
Akazadza vanoshaya nezvinhu uye mupfumi waakasiya asina kana chinhu.
Akakwidziridza muranda wake kuna Israeri, achimurangarira nezve ngoni dzake huru nokunaka.
Sezvaakavimbisa baba vedu Abhurahama uye nezvizvarwa zvavo zvese kubvira narinhi narinhi.
Munamato weiyo yepakutanga Magnificat kana Magnificat ine simba uye inogona kuitwa chero nguva kana mamiriro anomuka.
Kune avo vakasangana nezvakanaka zvishamiso mukati memunamato uyu, chimwe chinoitika kazhinji kazhinji ndiko kuwedzera kwekutenda, ichi chiri chishamiso chekurumidza kuti tinzwe mukati medu.
Mutsara uyu unogona kuitwa mumutauro wekutanga chiLatin, kana mushanduro dzawo dzakasiyana mune chero mutauro.
Munamato weMagnificent ekudzivirirwa muLatin
et exultavit mizimuus meus in Deo salutari meo
Ecce enim ex hoc hitam achindiudza amnes chizvarwa,
Iye anogadzira mangana anodya huni,
Etus eius ad progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio
vakaparadzira pfungwa repamusoro
masimba masimba makuru
Simba zvekushandisa dzivirirwe pachedu, mhuri, shamwari kana zvinhu zvekunyama zvakadai sedzimba, mabhizinesi kana mota.
Munamato uzere nekutenda unova yedu yakanyanya chengetedzo system kubva pane zvese zvakaipa zvatinoda kurwisa.
Zvakaoma kuyera simba yeminamato Sezvo izvo zvinoenderana nekutenda kunoiswa mazviri, saka isu tinoziva kuti chinongedzo chichaita kuti munamato uyu ushande zvinobudirira kutenda.
Isu tinoziva kukosha kwazvo kuti minamato iripo nguva dzose.
Ndokusaka aine munamato pazasi wekudhinda. Unogona kudhinda kuti unamate pese pese nepese paunoda.
Chii chiri munamato weMagnificent?
Pakutanga mutsara uyu wakaitwa uine chinangwa che zivisa ukuru hwaMwari nekutendera Maria kuti aunze muponesi pasi.
Nhasi uno munamato uyu uchiri kuitwa kunze kwekutenda kuna Mwari nekutiponesa kubva panguva dzakaoma, kune chimwe chishamiso chaakatambira uye zvimwe zviratidzo zvekutenda zvatingave nazvo pachedu.
Rwiyo runogona kushandiswa kukumbira kuchengetedzwa, zvevaroyi, batsira, nyaradza, kutenda uye zvishamiso zvinoshamisa.
Kufanana nemunamato wese une simba uye zvakagadzirwa kuti isu tishandise munguva dzatinenge tichinyanya kuda.
Chii chinotangira munamato uyu kumhandara?
Munamato kana rwiyo rwakafuridzirwa naMwari mumwechete uyo watinogona kuwana zviri nyore kwazvo mumanyoro matsvene, zvakananga muBhuku reEvangeri Sekureva kwaSanta Ruka muchitsauko 1, ndima 26 kusvika ku25.
Chinyorwa chizere nekutenda kuna Mwari uye kupi iyo Mhandara Maria inoziva ukuru uye simba raMwari baba.
Ndima yemubhaibheri iyo Maria anotidzidzisa kuti kuvonga kuna Mwari hakugone kushomeka, nemunamato uyu wakajeka tinogona kudzidza kuti maitiro aMwari, kunyangwe tikasazvinzwisisa, anogara achiunza makomborero kuhupenyu hwedu.
Naiwo Maria aive akamirira kuroora uye akazopedzisira ave nepamuviri nebasa uye nekutenda kunaMweya Mutsvene, mamiriro akaoma ayo aiziva kutarisana nemutoro nehungwaru kuunza Muponesi munyika.
Iko hakuna zuva kana nguva yekunyengetera.
Iwe unofanirwa kunyengetera kana uine kutenda uye kuda. Iyo nguva haina basa, chakakosha ndechekutenda musimba remunamato.
Gara uchitenda musimba reMhandara. Izvo ndizvo zvakakosha.
Tora mukana wesimba remunamato weMagnificent. Ane simba chaizvo!